Umkakhe - umngane umpristi othembekile. Ubani ongaba umama?
Meaning of igama elithi "umfazi yompristi", mhlawumbe engazazi kuwo wonke umuntu. Ikakhulukazi kubo, ake sithi ngesikhathi esisodwa ukuthi umfazi mpristi wama-Orthodox. Ukuphathwa kanjalo usephendukele umama ngoba ezinsukwini ubudala, bonke abapristi abantu wabiza abapristi. Ngemva kwalokho, isiteketiso idluliselwe kuzithoba kwabafazi bawo, kuphela kancane kokushintsha izwi labo.
NgamaKatolika washada umpristi - yinto ekude ukucabanga kwabo. Phela, bayaqiniseka ukuthi ubuhlobo obunjalo ukuphazamisa umuntu kuphela ukukhonza uNkulunkulu. Kodwa iSonto Lobu-Orthodox yalo mbuzo wakhuphuka nomusa ngaphezulu, ngoba sekuyisikhathi eside abantu ethu zenani ubungcwele umndeni. Abapristi bagwetshwa akungqubuzani ukushada njengoba ezinsukwini zika ERussia yasendulo, futhi bonke emhlabeni namuhla.
Namuhla, ngakho-ke, unkosikazi yompristi - kuba impela kuyinsakavukela. Nokho, akulungile ukuthi zonke intombazane umama. Phela, izinceku zikaNkulunkulu emhlabeni has imithetho yayo siqu, okuyinto ayikwazi wephule noma zinganakwa.
Ubani ongafaka ayoba umka umpristi?
Umama noma Deaconess - engumyeni ongokomoya umpristi. Iyingxenye ebalulekile, ngakho ngoba abantu abanjalo ukuthola owesifazane - kuyinqubo eside futhi kukhathaza. Kumelwe siqiniseke ukuthi nengoduso yakhe wayengeke amkhaphele, ngoba ukushada mpristi wama-Orthodox can kanye kuphela endaweni esaphila. Ngaphezu kwalokho, esikhathini esidlule, umpristi ongumfelokazi waphoqeleka ukuba ngokushesha ukuya esigodlweni sezindela.
Yiqiniso, namuhla akekho iye yakhetha ezinjalo ezedlulele. Noma kunjalo, imithetho ethile kanye namasiko aye ayizange ithuthuke kusukela ekusungulweni kwezwe leSonto Lobu-Orthodox. Ngokwesibonelo, inkosikazi yompristi - kuyadingeka intombazane ikholwa ohlonipha uNkulunkulu nabanye. futhi kufanele kube intombi ngesikhathi umshado, kanye umpristi yena.
Ngamafuphi nje, lo mama ngeke sibe abesifazane ohlukanisile, kanye labo babe nomntwana enye indoda. Phula lokhu umthetho kungenzeka kuphela ethole imvume ekhethekile yenzalamizi, bese kuphela njengesixazululo sokugcina.
Namuhla unkosikazi yompristi - kunzima kakhulu intombazane evamile. Ngokuvamile, akusona ihluke kwezinye abesifazane, ngaphandle ukushaya umyeni wakhe. Ngaphezu kwalokho, iSonto akakwenqabeli umama ukuphila okuvamile - bangaya emsebenzini, ukugqoka ibhulukwe futhi ukuya ebhayisikobho nabangani. Into esemqoka ukuthi ahlonishwe ukholo lwabo futhi bangalingcolisi ubungcwele igama umyeni wakhe.
Nokho, inkosikazi yompristi kufanele lilungiselwe yokuthi ukuphila kwakhe is zithandelana isiphetho akhethiwe wakhe. Phela abapristi - uyinceku esontweni, okusho ukuthi babophekile ngokungenamibandela ukufeza zonke oda zayo. Futhi uma udinga ukuthatha isikhundla saleyo parish komunye, bayoba ukukwenza, naphezu kwakho konke impumelelo kanye ubuhlobo ukuthi bayosala.
I eziyingozi nemikhuba emibi? Ezemidlalo ngokumelene imikhuba emibi
Barony - uhlobo bomhlaba
Street Umsuka kungani mgwaqo wabizwa ngokuthi Street
Amagama Scottish zabesifazane, ezihlukahlukene zabo nokubaluleka
Dipper Big futhi Dipper Little esibhakabhakeni: uhlu izinkanyezi, indlela yokuthola, tinganekwane izincazelo
Izimpukane ezibhebhezelayo - zingobani? Kungani izimpukane ziluma abantu nezilwane?
Kanjani umjikelezo carbon emvelweni, futhi kungani kubalulekile kithi
Amatshe sezinso: izimpawu e besilisa nabesifazane. Indlela ukuqeda ezinso?
Le filimu "Omunye UFlew Over Nest the Cuckoo sika": ukubuyekezwa. "Omunye UFlew Eminyakeni Cuckoo": nabalingisi izindima
Ukubulala eSrebrenica ngo-1995: izizathu
"Validol" ejenti ezithaka imithi. izinkomba
Imimoya Female ngubani othanda amadoda. Isilinganiselwa, incazelo ukunambitheka kanye nokubuyekeza